ह्याप्पी बर्थ डे बद्री - अफबिट - साप्ताहिक
गायक बद्री पंगेनी सोमबारदेखि ३८ वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । २०३८ साल असार १६ गते जन्मिएका बद्री सदावहार गायक हुन् । बद्रीका मन थिएन जोगी बन्नलाई, ससुरालीमा, लाऊ चेली सिन्दुर लाऊ, जनताको शासन, रातो पछ्यौरी तथा पानी सलल जस्ता गीत सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । निकै संघर्ष र उतारचढावका बीच लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बद्री अहिले राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत छन् । तिनै बद्रीको स्वभाव र बानीबेहोराका सम्बन्धमा उनका साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूको प्रतिक्रिया जन्मदिनको शुभकामनासहित :
गायक बद्री पंगेनीको असल र खराब बानी के–के छन् ?
त्यस्ता नराम्रो कुरा त केही छैन । ऊ मनमा लागेका कुरा दबाएर राख्नै सक्दैन, प्याट्टै भनिहाल्छन् । सुरु–सुरुमा भेट्नेहरूले छुच्चो वा घमन्डी पनि भन्न सक्छन्, तर ऊसँग राम्रोसँग भिजेपछि मात्र थाहा हुन्छ, ऊ मनको कति राम्रो छ भन्ने कुरा । आफ्नो कर्म क्षेक्रमा एकदमै त्रियाशील हुन्छ । व्यस्तताका बाबजुद पनि परिवारका लागि समय मिलाइरहेका हुन्छन् । बोलीमा प्रस्ट, अग्रजलाई आदर र अनुजलाई माया गर्ने खालका छन् । नयाँ सिर्जना गरिरहन सक्ने र आलोचना पचाउन सक्ने खुबी छ ।
भगवान भण्डारी, लोकगायक
गायक बद्री पंगेनीका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
अनुजहरूलाई अत्यन्तै माया र प्रोत्साहन गर्ने । नयाँ प्रतिभाहरूको पनि कदर गर्ने, नवोदित कलाकारलाई नेतृत्व गरी अघि बढाउन सक्ने, क्षमतावान्, असल र अब्बल व्यक्तित्व । उतिबेला आफ्नो घरमा टिभी नभएर अर्काको घरमा ‘मन थिएन जोगी बन्नलाई’ गीत हेर्दा दाइ जस्तै हुन पाए हुन्न्थ्यो भन्ने म, आज दाइकै छत्रछायाँमा रहेर दाइबाट केही सिक्न, जान्न अनि बुझ्न पाउँदा निकै गौरवान्वित महसुस गर्छु । दाइलाइ त्यति बेला भन्दा पनि अहिले जवान देख्छु म । त्योचाहिँ अचम्म
लाग्छ । त्यस्तै जवान हुन हामीलाई नि सिकाइदिए हुने ।
वसन्त विश्वकर्मा, लोकगायक
बद्री दाइ एकदमै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । दाइसँग काम गर्न त झन रमाइलो हुन्छ । नजानेको कुरा सिकाउने, हँसाइरहने मज्जाको मान्छे हो उहाँ ।